by admin taariikhdu markay ahayd 19-12-24
Tallaabada Tallaabada Cabbir-bararka ayaa ah joornaallada loogu talagalay dhammaan farshaxan-yaqaannada-hawada: laga bilaabo bilowga ilaa kan horumarsan, ka-soo-saareyaasha hawada ee caadiga ah illaa naqshadeeyaha, jirka iyo turjubaanka macaamiisha illaa sawir-yaqaan xirfad yaqaan ah. Tallaabada Tallaabo-gacmeedka ayaa loogu talagalay dhammaan dadka daneynaya mawduucyada kubbadda-celiska ee wax-ku-oolka ah oo doonaya ...
Harder & Steenbeck: Tiknolojiyad cusub oo loogu talagalay cirbadaha adag
Harder & Steenbeck waxay dhowaan maalgashi xoog leh ku sameysay xaruntooda wax soo saarka ee Norderstedt, Germany. Saddex mashiinno cusub oo heer sare ah oo CNC ah sannadkan ma ahan oo keliya inay si weyn u kordhiyeen awoodda wax-soo-saarkooda, laakiin sidoo kale waxay fureen habab cusub oo loogu talagalay naqshadeynta alaabada, iyo horumarka. A ne ...
“Afar qaab oo lagu buufiyo” - kani waa magaca fikradda cusub ee suuqgeynta ee ay soo saartay shirkadda soo saarta hawada Japan ee Iwata. Shirkadda waxay moodeysaa inay adag tahay, laakiin talaabo si gaar ah u caawineysa dadka bilowga ah, iyadoo ujeedo qaabeynta hawada ay tahay mid aad ku tilmaami karto inuu yahay mid saaxiibtinimo adeegsanaya. Hadafka halkan waa in ...
Qoriga loo yaqaan 'Spray gun' waa nooc ka mid ah qalabka u adeegsada siideynta deg degga ah ee dareeraha ama hawo isku buuqsan sida awoodda. Waxaa loo isticmaali karaa dhismaha buufinta iyo waa aalad lama huraan ah habka qurxinta. Waxaa loo isticmaali karaa goobta lagu buufiyo gaadhiga, sida buufinta kulaynta baabuurta, baabuurta OEM s ...